Imbaasiin Faransaay harree Burundiif arjoomuun 'arrabsoodha' jedhame - BBC News Afaan Oromoo
Imbaasiin Faransaay Burundii keessatti kan argamtu aradaa Giteegaa jedhamtu keessa namoota jiraataniif harreewwan kudhan arjoomu isheen walqabate, gorsaan pirezidaant Pi'eerii Nikurinzizaa tuffiidha jechuun AFP'ti dubbatan
Ministeerri qonnaa, dhaabbata tola ooltummaa dubartootaa fi ijoolee irratti hojjetu tokko bakka bu'uun biyyatti oollaaTaanzaaniyaarraa harroota kan akka bitu gaafatan.
Dhabbanni tola ooltumma kun dubartootaa fi ijoolee giddu galeessa godhachuun kan hojjetu wayita ta'u, harroota kanaan meeshaalee bu'a qonnaa akkasumas bishaanii fi qoraan itti fe'uun hojiin ba'aa dubartootaa fi ijoolee kanarra akka salphatuuf jecha ture harroota kana bituuf kan karoorse.
Bulchaan naannoo sanaa harroonni kunneen hundi hatattamaan walitti qabamuun naannoo sanaa baafamuurratti akka qindeessan Ministirri qonnaa Diyyo Gaayid gaafataniiru.
Dubbi himaan pirezidaantii mana marii Burundii Gaabiiy Bugaagaa ammoo, ''Faransaay sadarkaa harreetti gad nu buufteetti; harreen mallattoo maaliitii?'' jechuun fuula twiitarii isaaniirratti barreessaniiru.
Ambaasaddariin Faransaay Looreent Daalahwuusee ammoo ''Deemsi hojii kanaa beekamaa ture. Kun deemsa haarawaa miti. Kanaan duras gargaarsa Beeljiyeem irraa argameen projeektiin walfakkaataan kutaa Baha Ruuyih keessatti godhamee beeka; haa ta'u malee qeeqi tokkoyyuu irra hingeenye,'' jechuun dubbataniiru.
Maaqaan isaanii akka hin himamne kan barbaadan dippiloomaatiin Awurooppaa tokkommoo, heera biyyattii wayyeessuuf Burundiin referendamii dhiheenyatti geggeesite irratti Faransaay qeeqa dhiheessiteef deebiidha jechuun AFP'tti dubbataniiru.
Refrendemiin geggeefame kun Pirezidaantichi hanga ALA 2034 aangoorra akka turan kan isaan dandeesiisuudha jechuun qeequunshee ni yaadatama.